Ao Damaskosy, Mampididoza ny Fanehoam-Piraisankina Amin’i Ghouta Atsinanana Tratran’ny Fahirano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2018 5:09 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Ελληνικά, عربي, Español, русский, Português, English
‘Ghouta,’ hosodokon'i Randa Maddah. Nahazoana alalan. Loharano: Women Now.
Andiam-pijoroana vavolombelona avy any Damaskosy (Damas) ny lahatsoratra manaraka etoana. Misy ny fijoroana vavolombelona roa avy ao Ghouta Atsinanana (any amin'ny tanàna itatr'i Damaskosy) avy amin'ny mpanampy mpitsabo iray sy mpitsabo nify, nivoaka tamin'ny 20 febroary sy 4 marsa 2018 teo ary navoakan'ny fiaraha-mientana Act For Ghouta.
Nofehezin'ny mpioko, nanaovan'ny fitondrana syriana sy ny mpiara-dia aminy fahirano i Ghouta atsinanana hatramin'ny farany taona 2013. Saingy niha-nahery vaika ny herisetra tao anatin'ny volana vitsivitsy. Olona mihoatra ny 120 no maty teo anelanelan'ny 6 Febroary ka hatramin'ny 8 Febroary fotsiny, ary tamin'ny faha-19 Febroary dia olona mihoatra ny 110 no maty tao anatin'ny indray andro fotsiny. Hatramin'ny faha-18 Febroary 18, olona mihoatra ny 650 no maty, mihoatra ny 150 amin'ireo no ankizy. Tratran'ny fahapotehana goavana ihany koa ny fotodrafitrasan'ny sivily, ary mihoatra ny 25 ny hopitaly sy ny toeram-pitsaboana tratra, ny sasany mihoatra ny indray mandeha tao anatin'ny efatra andro.
Miha-miseho masoandro hatrany ny voina mahatratra ain'olombelona ao amin'ny tanàna itatr'i Ghouta atsinanan'i Damaskosy noho ny fanafihana tsy ankiato ataon'ny tafika Syriana sy Rosiana amin'ny alalan'ny bemidina miaramila iadiana amin'ireo mpikomy tratran'ny fahiranon'ny governemanta Syriana hatramin'ny taona 2013.
Voatatitra fa olona 650 no maty hatramin'ny febroary 2018. Mihamiakatra izany isa izany noho ny fidarohana baomba avy ety an-tanety sy avy eny an'habakabaka ary amin'ny fandravana faobe ny fotodrafitrasa. Tonga haingana sady betsaka ny lahatsary avy any Ghouta atsinanana, ahitana ny topimason'ny halalin'ny toe-draharaha sy ny hirifirin'ny mponina ao.
Ao amin'ny media sosialy, namoaka fanambarana niangavy ny miaramila syriana hanakana ny fanafihana amin'ny balafomanga mihatra amin'ny Damaskosy renivohitra ny mpanohana ny filoha Bashar, manondro kosa ireo alefan'ny mpioko avy ao Ghouta Atsinanana, izay nirongatra hatramin'ny nanombohan'ny fitondrana ny fanafihana tao Ghouta.
Ny fampitam-baovaom-panjakana syriana efa namoaka ireo antsafa nifanaovana tamin'ny olona eny an-dalamben'i Damaskosy tezitra amin'ny fanafihana amin'ny balafomanga midona amin'ny tanànan-dry zareo ary manome tsiny ny mpioko ao Ghouta atsinanana. Mandrisika ny governemantany ry zareo ‘hamono ny afon'ny fanafihan'ny mpioko.’
Ny fomba fitondrana tsirefesi-mandidy sy ny fahafenoan'ny mpiasan'ny filaminana manerana ny tanàna no tsy ahafahana velively manombana ny habetsaky ny mpanohitra ao Damaskosy avy amin'ny fanafihana an'i Ghouta. Na dia sarotra aza ny ahitana azy ireny dia maro ihany ny bitsibitsika mipongatra. Mangina ny ankamaroan'ny maro satria manana tombony ara-miaramila ny eo amin'ny fitondrana.
Miteny amin'ny Global Voice i Salam (tsy izay no tena anarany), renin'ankizy anankiroa monina ao Damaskosy, fa mihamihombo ny trangan-tsy fahazakana zavatra ao amin'ny zananilahy noho ny fiainany ao anaty tahotra hatrany:
Mikiakiaka aoka izany sady mitampikitra amiko haingana ny zanakolahy roa taona rehefa misidina ao amboninay ny voromby mpiady na rehefa misy ny fipoahana… Nampihombo tsy fahazakan-javatra izy.
Nampiany fa mihamanahirana ny fiainana ao Damaskosy noho ny balafomanga alefan'ny mpioko, ary tsy azony alainy sary an-tsaina izay mety hitranga any Ghouta:
Hatramin'ny nanombohan'ny Bemidina Ghouta, dia henonay mihabetsaka tsy araka ny mahazatra ny fipoahana… ary mampihozongozona ny trano ny fandalovan'ny fiaramanidina iray ambony loha. Mampipoaka ny lohako ny maka sary an-tsaina ny izàran'ny reny ao Ghouta ny tahaka izao. Raha tany aho dia efa tena lasa adala. Reny aho ary fantatro ny fahatsapan'ny reny. Nijery lahatsary aho ary nanjohy tsanganana Facebook avy amin'ny reny ao Ghouta. Tsy mety amiko mihitsy ny tsy hangoraka.
Manohintohina ny fiainana eto Damaskosy ny balafomanga sy ny daroka baomba. Tsy mandefa ny zanany any an-tsekoly intsony ny olona any amin'ny fokontany sasany. Mba alaivo sary an-tsaina ny fiainana any. Ny sivily avy amin'ny andaniny sy ny ankilany no mizaka ny vokany. Tsy maintsy atsahatra izao fahadalàna izao.
Ahmad (tsy izay no tena anarany), mpiasan'ny governemanta avy ao Harasta ao Ghouta Atsinanana tany am-boalohany, nandao ny tanànany ary namonjy an'i Damaskosy niaraka tamin'ny fianakaviany vantany vao nanomboka namoritra ny fihetsiketsehana tao an-tanindrazany ny governemanta. Nandany ny fotoanany niraikitra teo anoloan'ny solosaina findainy i Ahmad hanjohiany ny fivoaran-draharaha ao Ghouta ary manahy ny ain'ny havany sy ny toeram-piasany hatrany izy ao Damaskosy:
Manan-kavana sy namana aho ao Ghouta Atsinanana. Milaza hatrany ny vaovao farany sy ny helo iainany amin'ny alalan'ny media sosialy. Namako telo izao no efa maty hatramin'ny nanombohan'ny bemidina.
Araha-maso akaiky ny mpiasa avy ao Ghouta. Tsy maintsy mitandrina ianao mba tsy haneho na dia fangorahana aza. Tsy maintsy mandanjalanja ny teninao ianao.
Raha nanontaniana izy hoe inona no mety ho fiantraikany dia nilaza i Ahmad hoe :
Mety ho lasa ahiahiana ho manana fifandraisana amin'ny ‘mpampihorohoro’ ianao, mety ho very asa ianao raha vao misy manome torohevitra anao. Mety ho tratran'ny famonjàna aza. Amin'ny ankapobeny dia misy ny tsy an-kiteniteny ifanekena fa ny fahanginana ihany no fiarovana tsara indrindra azonao atao.
Nofariparitany fa tsy hainy izay atao raha misy mpiara-miasa miantso ny ‘hamafana tanteraka an'i Ghouta':
Rehefa misy mpiara-miasa mitaraina amin'ny daroka baomba sy balafonga ka miantso ny ‘hamafana tanteraka an'i Ghouta’ ho setrin'ireny, ny hany azonao atao dia ny mitsiky sy ny mizaka. Mahatsiaro ho kizitina aho. Manan-kavana sy namana any aho. Manana ny tranoko any aho izay efa itokisako fa efa korotam-bato amin'izao fotoana izao. Tao ny fahazazako sy ny fahatanorako.
Ao anatiko lalina ao aho mahafantatra fa kanosa. Saingy tsy misy na inona na inona azonay atao. Manana ny hery miaramila ry zareo miaraka amin-dry zareo. Na ny Firenena Mikambana sy ny firaisamonina iraisampirenena aza nanaporofo fa tsy mahahetsika ry zareo. Voafandrika ao anatin'ny tsy fahavitanay na inona na inona izahay.
Omar (tsy izay no tena anarany), mpianatra oniversite avy ao amin'ny distrikan'i Qaboun akaikin'i Damaskosy namoaka ny eritreriny:
Raha iverenana ny tamin'ny taona 2006, dia tsaroako tsara ny fotoana nandraisanay fianakaviana libaney nandositra ny ady israeliana tao an-tranonay ao Qaboun. Tsaroako ny rahalahiko nirotsaka an-tsehatra tamin'ny tranohevan'ny firaisan-kina sy fanangonam-bola ho an'ny vahoakan'i Gaza nandritra ny bemidina Israeliana. Amin'i Ghouta kosa izahay tsy lavina ny fanehoana firaisankina aminy. Mitsiriritra ny vahoaka manerana ny gilaoby afa-manao fihetsiketsehana sy mihiaka mafy ho firaisan-kina amin'i Ghouta aho.
Nilaza i Omar fa nanangana kaonty Facebook faikany izy hanaovana fanentanana an-tserasera sy izaràny ny kaontin'ny olona avy ao anatin'i Ghouta. Mavitrika ao amin'ny media sosialy i Omar ary milaza fa mandika izay voasoratr'ireo kaonty, lahatsoratra ary lahatsarin'ireo olona tratran'ny fahirano ao anatin'ny fanantenana fa “mandranitra ny hevi-bahoaka izy ho tonga any amin'ny hetsika”.
Na dia manodina ny lohanao tsy hahita ity voina ity aza ianao, fipoahana iray dia mamerina azy ho eo amin'ny retsikao. Tsy misy fomba tsy iraharahianao azy… Fahakaikezana ara-jeografika, fitoviam-poko ary ny mahaolombelona no mandidy azy.